Ụbọchị My Pet » 10 Mbụ Ụbọchị ekike Atụmatụ maka Men
emelitere ikpeazụ: Jan. 21 2021 | 2 min agụ
Anyị na na na niile zutere ndị mgbe bụghị na-achọ ihe kasị mma anyị. Anyị na-na zutere agbata obi ọhụrụ mgbe ịsụ ahịhịa. Anyị na-na zutere a ọhụrụ ọrụ ibe n'ụbọchị mgbe anyị na-atasị kọfị na anyị uwe elu. Dị ka okwu na-aga, naanị ihe anyị na-otu ohere ime ka a mbụ echiche. Anyị ga, Otú ọ dị, ịhụ ndị agbata obi anyị na-arụkọ ọrụ eleghị anya karịa anyị chọrọ. A ụbọchị bụ dị iche iche. Mbụ, ọ dịghị nkwa na ị ga-esi ohere ọzọ ụbọchị. Nke abụọ, ọ ga na-elekọta ọtụtụ ihe ndị ọzọ banyere ọdịdị gị karịa onye agbata obi gị ma ọ bụ ọrụ ibe. Echegbula, ezie. M ebe a iji nyere aka na 10 Mbụ Ụbọchị ekike Atụmatụ maka Men.
1. Ejiji na iwu larịị nke ihe omume. Ọ bụrụ na ihe fọrọ nke nta ọ bụla ọzọ nwoke na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ga-yi a egwuregwu jaket, ị kwesịrị ị na-egosi enweghị onye. Ọ bụ nnọọ mfe na-eji ejiji ala na ada karịa na-eji ejiji elu ma ọ bụrụ na ị na-ahụ onwe gị underdressed.
2. Ejiji dabara na ihu igwe. Ka anyị kwuo na ị nwere nri abalị atụmatụ na mgbe nri abalị gị ụbọchị na-atụ aro na-eje ije n'okporo ámá maka eji megharịa ọnụ. Ị chọrọ ka a kwadebere.
3. Eyi mma akpụkpọ ụkwụ! Ọ dịghị slịpas ma ọ bụ tennis akpụkpọ ụkwụ…gwụla ma ị na-na na osimiri ma ọ bụ na-akpọ tenis. Women n'anya akpụkpọ ụkwụ na ha ga-achọpụta gị.
4. Ígwè gị uwe elu. Ike anyị agaghị achọpụta (ma ọ bụ na-elekọta) ma ọ bụrụ na anyị Chiefs na-edetịa, Ma ọ ga-yikarịrị mara (ma na-elekọta).
5. Eyi ihe na-dabara nke ọma. The kwesịrị ekwesị nke uwe gị dị mkpa karịa ika, style ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ. N'ihi na ndị ị nwaa na-eyi a super uko uwe elu…emela…dị nnọọ emela…
6. Eyi ihe ị na-na-na-na ala. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị na-agbasaghị inwe ụjọ na a mbụ ụbọchị, -enye onwe gị otu obere ihe na-echegbu onwe banyere.
7. Eyi a belt na-eme ka n'aka na ọ ọkụ akpụkpọ ụkwụ gị. Ọ na-eme gị ekike anya zuru ezu karị,.
8. Get nzaghachi. Jụọ gị na ya bi, enyi, ọrụ ibe ma ọ bụ onye ị tụkwasịrị obi banyere gị ekike. Ị na-adịghị ka ha na-eji ejiji gị, ma, nanị na-arịọ ma ọ bụrụ na ị na-ele OK nwere ike inyere gị si.
9. Unu na-eyi ihe ọ bụla kwa oké ma ọ bụ flashy. Ị na-adịghị eji ejiji ka nna nna gị, ma ị na-achọghị na uwe gị na-a ndọpụ uche. Ma n'otu oge…
10. Bụrụ onwe gị! Women n'anya obi ike. Eyi ihe na-egosipụta àgwà gị.